Gabaasaa GGO Ebla 15 Godina Booranaa fi Harargee Irraa Nu Gahe | QEERROO
Gabaasaa GGO Ebla 15 Godina Booranaa fi Harargee Irraa Nu Gahe
Posted on April 19, 2013 by Qeerroo
Gabaasa Qeerroo Finfinnee Ebla 20,2013
Rakkoo quunnamtii networkiin kan gabaasaan isaa boodatti harkifate guyyaa gootota oromoo Ebla 15 Oromiyaa keessaa naannoo adda addaatti kabajamee jiru ammallee gabaasaan isaa kan nugahaa jiru:1.Godina Booraa Ona ;
1.3 Galaana Abbayyaa
1.4 Liiban fi
1.5 Shaakkisoo irraa haala hoo’aan kabachaa turuu isaanii akkasuma kanatti dhimma bahuudhaanis ijaarsa maadhee fi leenjii uummata armaan dura ijaarsi hin qaqqabin jiru qaqqabuun ayyaana kanaan wal qabsiisanii hojii hojjetaa akka turan gabaasaan Qeerroo addeessa. Keessattuu hojiileen hojjetaman:-
-Leenjii siyaasaa uummata naannoo jiranii fi kan itti amananiif kennaa turaniiru,
-Barattoota mana barumsaa sadarkaa 1ffaa fi 2ffaatiin leenjii siyaasaa kennamaa tureera.
-Hidhattootni mootummaa milishaa gandaa fi poolisoonni maadhetti ijaaramanii godina kana keessaa ona Dirree fi Liiban irra jiran walitti dhufanii wal ijaarsa,qabsoo keessatti kallattii isaan irratti hirmaachuun barbaachisuun waadaa seenaa,barruu dhaabaa kanneen siyaasa keenya hin hubatin ittiin gahuun raabsaa fi buusiin sochii qeerroo godina sana irra jiruuf deggersa gochuuf gumaacha gochuun GGO kabajachuun haala dabarsanii akka jiran gabaasaa isaa nuun gahanii jiru.
2.5 Daaroo Labuu
Akka gabaasaa GGO onoota kana irraa nugahee jiruttis;
-Hidhataan mootummaa maadhee keessatti ijaaramee jiu bakka tokkotti wal gahuun guyyaa kana icciti qabeessaan bosona keessatti kabajaa isaanii akka raawwatan nuuf dhaamu.Akkasuma ibsa ejjennoo lafa kaayatanii nuuf dhaaman:
-Yoomiyyuu ajajaa fi dirqama dhaaba keenyaan durfamnee qabsoo bilisummaa oromoo galmaan gahuuf tokkummaadhaan akka kaanu murtoo keenya ibsanna.
-Nuti hidhattootni mootummaa godina Harargee irra jirru dhugaa fi miidhaa uummata keenyaa oromoo hubannee waanjoo garbummaa saba keenya irra jiru kana,mootummaa wayyaanee nurratti goobee jiru of irraa fonqolchuufgama keenyaan ni qabsoofna!
-Wareegama qabsoof barbaachisu gochuuf yoomiyyuu boodatti hin jennu!
-Ilmaan oromoo mana hidhaatti dararamaa jiru gargaarsa barbaachisu gochuuf; isaanii fi maatii isaanii cina tokkummaa qabnuu fi ijaarsa keenya kanaan gumaacha barbaachisu ni goona jedhuun ibsa ejjennoo isaanii kan ibsatan yoo yahu godina kana irratti haalli kabajaa GGO ittiin darbe yaadannoo gootota darbanii waliif kaasuun,faaruu wal dheggeeffachiisuun akkasuma ijaarsa qaban irratti buusii adda addaa gochuun barruu ittiin baayisaa bittimsaa fi kuusaa barruu dhaaba irraa dhufu qopheessuun kabajaa ayyaana kanaa dabarsanii jiru.Ammallee Qeerroon godina kana irra jiru sochiin qeerroo fi uummataa jabaatee akka fufaa jiruu fi babal’inni siyaasaa godina kana irratti hanga hidhataa mootummaa fi waajjiraalee godinicha keessa jiruutti haalaan kan jabaataa jiru tahuu isaa nu hubachiisee jira.
1 thought on “Gabaasaa GGO Ebla 15 Godina Booranaa fi Harargee Irraa Nu Gahe”
Muhe on April 19, 2013 at 8:43 pm said:
Jabaadhaa haaluma kanaan itti fufa.